Xog ku saabsan dhacdadii Garoonka diyaaradaha | KEYDMEDIA ONLINE
Xog ku saabsan dhacdadii Garoonka diyaaradaha
Muuqaaladii la soo geliyay baraha bulshada ayaa fadeexad ku noqday dowladda oo waji-gabax kala kulantay dhacdada.
MUQDISHO, Soomaaliya - Garoonka Aadan Cadde ee Muqdisho waxaa 22-kii bishan ka dhacay gacan-ka-hadal dhexmaray askar katirsan NISA iyo shaqaalaha hay'adda Socdaalka ee Mas'uulka ka ah hubinta dadka soo galaya iyo kuwa ka baxaya madaarka.
Muuqaalka ay duubeen Kaamirooyinka CCTV ayaa banaanka soo dhigay rabshadihii dhacay, oo ka dhashay dhaawac iyo burbur soo gaarey xafiisyada hay'adda Socdaalka ee qeybta ay ka baxaan dadka dibadda u socda [International departure].
Keydmedia Online oo baaritaan ku sameysay dhacdadan ayaa ogaatey in dagaalka uu ka billowday saddex nin oo ajnabi ah oo u timid NISA, kuwaasoo markii ay ka duulayeen Garoonka la isku dayay in iyagoo aan la marsiin hubin Immigration-ka inay diyaarada raacaan.
Muddo saddex maalmood ayay saddexda qof oo waxay ahaayeen la ogeyn ku sugnaayeen Muqdisho, iyagoo la kulmay Fahad Yaasiin, taliyaha NISA kaasoo xiriir dhaw la leh dowladda Qatar, oo saameyn ku leh xiligan siyaasadda Soomaaliya.
Saraakiisha NISA ayaa jebiyay xeerarka Garoonka ee dhanka ilaalinta amniga, waxayna xoog diyaarad ku saareen dad ajnabi ah oo ay diideen in la baaro sababta dalka ku joogeen iyo bixitaankooda in la xaqiijiyo oo baasaboorkooda loogu dhufto bixitaan [Exit].
Mudo dhowr saacadood ayuu hakad galay duulimaadka diyaaradaha, iyadoo falkii foosha xumaa ee dhacay ceeb iyo waji gabax ku noqotay maamulka Farmaajo oo hadda gabalkiisu sii dhacayo.
Amaanka Garoonka kalsoonidii lagu qabay ayaa hadda khatar ku jirta, iyadoo walaac lag muujiyay ficiladda NISA iyo xadgudubyada ay ka geysanayso goob laga safro oo waji u ah wadanka sumcadiisa. Taliska Ciidamada AMISOM ayaan ka hadlin falkii dhacay.
Rooble ayaa cambaareeyay isagoo magacaabey gudi baaritaan, oo illaa hadda wax warbixin ah kasoo saarin howshii loo diray, waxayna u muuqatay in dadweynaha oo kaliya lagu qancinayay, oo aan dhab ka ahayn in la baaro fal NISA ku lug leedahay.